RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday saxiixa xiddiga reer France ee Antoine Griezmann – Gool FM
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday saxiixa xiddiga reer France ee Antoine Griezmann
Dajiye July 12, 2019
(Spain) 12 Luulyo 2019. Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah kala soo saxiixatay Antoine Griezmann kooxda Atletico Madrid, si ay ugu xoojisato weerarkeeda.
Barcelona ayaa boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka waxay ku shaacisay fiidiyoow ay ku soo dhaweeneyso Antoine Griezmann.
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee kooxda Barcelona, Griezmann ayaa wuxuu saxiixi doonaa qandaraas muddo shan sano ah, iyadoo qiimaha heshiiskiisa lagu kansalayo la gaarsiin doono ilaa iyo 800 milyan euro.
Qareenka Antoine Griezmann ayaa tagay xarunta maamulka horyaalka La Liga dhowr saacadood ka hor si uu u bixiyo qiimaha lagu kansalay heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid ee dhan 120 milyan oo ginni, taasoo ay bixisay Barca.
Sida laga soo xigtay dhowr wargeysyo ee dalka Spain ah, Barcelona ayaa Antoine Griezmann u soo bandhigi doonta warbaahinta iyo jamaahiirteeda maalinta Axada ee soo aadan, isagoo qeyb ka noqon doono tababarka kooxda isla maalinta xigta ee Isniinta ah.
Maamulka Inter Milan oo ka hadlay hadii doonistooda Romelu Lukaku ay tahay mid run ah? Halkeyse wax marayaan?
Antoine Griezmann oo durba la ogaaday lambarka uu u xiran doono kooxdiisa cusub ee Barcelona… (Waa kuma xiddiga weyn ee lambarkaas looga qaadi doono?)